दोस्रो लार्जेस्ट पार्टी एमाले नै हुन्छ :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
दोस्रो लार्जेस्ट पार्टी एमाले नै हुन्छ
रामसरोज यादव, नेता, नेपाली कांग्रेस धनुषा
० साउनभित्रै उम्मेदवारको टुंगो लागिसक्ने उद्घोष भएको थियो, किन भएन ?
– उम्मेदवारको टुंगो लगाउने गृहकार्य चलिरहेको छ । हामी जिल्लाका साथीहरू बसेर धनुषाका बारेमा छलफल गर्दैछौं । सकेसम्म हामी आफैं टुंगो लगाउँछौं, त्यो नभए पार्टीका महामन्त्री, पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्यहरू, क्षेत्रीय सभापति सम्मिलित एउटा समिति बनाइएको छ, त्यसले मिलाउने छ । तर हामी आफैं पनि मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले त्यसका लागि काम भइरहेको छ, एक दुई दिनमै टुंगो लाग्छ ।
० आकांक्षीहरू धेरै भएकाले समस्या भएको हो ?
– हो, धनुषा यस्तो जिल्ला हो, जहाँ कांग्रेसका क्याडर नै क्याडर छन् । पार्टीमा लगानी गरेका क्रियाशील, जुझारु नेताहरू धेरै छन् । कांग्रेसका बुद्धिजीवीहरू पनि धेरै भएको जिल्ला हो यो । एउटा नगरपालिकामा मेयर, उपमेयरमा दस पन्ध्रजनासम्मले आकांक्षा देखाएका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । तर पनि हामीले मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौं । एकजना जसले टिकट पाउँछ, त्यसलाई हामी सबै साथीहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं । प्रतिस्पर्धी बढी हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई अस्वाभाविक नमानौं । सबै साथीहरू खारिएका छन् । जेल गएका छन् । काम गरेका छन् । मलाई विश्वास छ, सबैभन्दा बढी सिट हामी जित्दैछौं ।
० टिकट नपाउने नेताहरूले पाउनेलाई सहयोग गर्ने स्थिति आउँछ त ?
– नेपाली कांग्रेस स्थिर पार्टी हो, यसमा धैर्य गर्नेहरूको कमी छैन । टिकट नपाएपछि अलि अलि रियाक्सन त आउँछ नै, यो स्वाभाविक हो । त्यो रियाक्सनलाई हामी मत्थर गर्छौं । धनुषाका कांग्रेसका नेताहरू बौद्धिक छन् । संघर्षशील छन् । पार्टी हितविपरीत जाँदै जान्नन् । त्यो पक्का हो । त्यसैले यो ठूलो कुरा होइन, कुनै समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ ।
० असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ ?
– यसपछि प्रदेश सभा र संसद्को निर्वाचन आउँदैछ । अहिले छुटेकाहरू त्यसमा पर्न सक्छन् । चुनावमा व्यक्ति हार्ने होइन, पार्टी हार्ने हो । व्यक्ति जित्ने होइन, पार्टीले जित्ने हो । पार्टीलाई जिताउन धनुषामा सबै कांग्रेसका नेताहरू एकजुट हुनेछन् ।
० धनुषामा अन्तर्घात हुने स्थिति छैन ?
– अलि अलि रियाक्सन होला, तर त्यो मत्थर हुन्छ । हामी एक ठाउँमा आउँछौं । कांग्रेसलाई जिताउन एक हुन्छांै । अन्तर्घात हुँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
० तपाईहरूले कति सिट जित्नु हुन्छ ?
– धनुषामा १८ वटा स्थानीय तह छन् । त्यसमध्ये हामी १४ या १५ सिट जित्छौ । यो पक्का हो । यसमा शंका नगरे हुन्छ ।
० अति महत्वाकांक्षी अनुमान होइन र ?
– हो, किनभने नेपाली कांग्रेसका लागि धनुषा सबैभन्दा बलियो क्षेत्र हो । यहाँ कांग्रेस धेरै बलियो छ । यो कांग्रेसको उर्वरभूमि हो ।
० २ नम्बर प्रदेशमा तपाईहरूले समग्रमा कति सिट जित्नु हुन्छ ?
– २ नम्बर प्रदेश कांग्रेसका लागि उर्वरभूमि हो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावलाई आंकलन गर्ने हो भने कांग्रेसलाई २ नम्बर प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी सिट आएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा पहिले १२७ सिट थियो । अहिले त्यो बढेर १३६ पुगेको छ । १३६ सिटमध्ये हामीले कम्तीमा सय सिटभन्दा माथि जित्छौ । यतिखेर हामीले २ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाको स्थितिबारे बुझिरहेका छांै । एक अर्काको अवस्थाबारे पनि सरसल्लाह भइरहेको छ । हम्रो बारेमा पनि उनीहरूले बुझेका होलान् ।
० उम्मेदवारको टुंगो कहिलेसम्म लाग्छ ?
– अब दुई तीन दिनसम्म सबै उम्मेदवारको टुंगो लाग्छ । अहिले हामी सबै साथीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर छलफल गरिरहेका छौं । उम्मेदवारको टुंगो छिट्टै लगाउँछौ । पार्टी कार्यालयले पनि छलफल चलाइरहेको छ । विभिन्न सेक्टरबाट आएको सूचनाको विश्लेषण भइरहेको छ ।
० एक दुई दिन भन्नाले सोमबारसम्म टुंगो लगाउनु हुन्छ त ?
– हो, सोमबारसम्म २ नम्बर प्रदेशका सबै उम्मेदवारको टुंगो लगाउँछांै ।
० उम्मेदवारको टुंगों लगाउन ढिलो हुनुको कारण के हो त ?
– मैले पहिले नै भनें, हाम्रो पार्टीमा आकांक्षीहरू अत्यधिक छन् । उनीहरूलाई मिलाउन गाह्रो भएको छ । कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्नै गाह्रो छ । नेताहरूमा अलिकति तलमाथि भएको भए मिलाउन सजिलो हुन्थ्यो, तर सबै एक से एक छन् । कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । साथीहरू एउटै लेबलका छन् । एउटा लेबल भएकाहरूलाई मिलाउन अलिकति अप्ठ्यारो त पर्छ नै । भोलि पर्सिसम्म टुंगिन्छ ।
० केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भयो होइन ?
– जिल्लाको स्थितिबारे हामीलाई जति थाहा छ, केन्द्रलाई त्यति जानकारी नहोला । केन्द्रीय नेताहरूले बढी हस्तक्षेप गरे भने २ नम्बर प्रदेशमा हाम्रो पार्टी एक नम्बर हुने स्थिति आउँदैन । यो कुरा नेताहरूले बुझ्नु भएको छ । हाम्रो जिल्लाको ग्राउन्ड रियालिटी उहाँहरूले बढी बझ्नु भएको छ । त्यसैले सकेसम्म हामीले जिल्लाबाटै मिलाउने प्रयास गर्छौं । र, यो काम पनि भइरहेको छ ।
० २ नम्बर प्रदेशमा चुनावको तयारी सुरु भइसकेको छ ?
– चुनावको तयारी सुरु भइसकेको छ । गाउँगाउँमा, वडावडामा साथीहरू जान थाल्नुभएको छ । हामी काठमाडांैबाट फर्केपछि यो हाम्रो चुनावी अभियान झनै तीव्र हुन्छ । अब हामी प्रचार प्रसारमा जुट्छौ । २ नम्बर प्रदेशमा अरु पार्टीभन्दा हाम्रो पार्टी फरक छ । हाम्रो संगठन वडावडा, गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । व्यक्ति व्यक्तिमा हाम्रो पहँुच छ । त्यसैले हामीलाई चुनावी प्रचारमा लाग्न त्यति असजिलो हँुदैन । मधेसका जनताले हामीलाई साथ दिन्छन्, कांग्रेसलाई माया गर्छन् ।
– हाम्रो प्रतिस्पर्धा त एमालेसँग नै हुन्छ । २ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो पार्टी एमाले नै हुन्छ । तर जनकपुर उपमहागरपाालिकामा एमाले अत्यन्त कमजोर छ । अरु ठाउँमा प्रतिस्पर्धा एमालेसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ । दुई चारवटा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रसँग पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । उत्तरी साइडमा माओवादी बलियो छ । केही वडा र केही ठाउँमा मधेस केन्द्रित दलहरू पनि बलियो देखिएका छन् ।
० समग्रमा मधेस केन्द्रित दल २ नम्बर प्रदेशमा बलिया छैनन् ?
– यहाँ मधेस केन्द्रित दलको संगठन छैन । हाम्रो जिल्लामा त उनीहरूको संगठन कमजोर छ, तर पनि उनीहरूको सेन्टिमेन्ट छ । त्यही सेन्टिमेन्टले उनीहरूलाई अलिकति भोट तान्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
० अब राजपा पनि चुनावमा आउने भयो । राजपासँग तपाईहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हँुदैन ?
– राजपासँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुँदैन । उनीहरूको संगठन हाम्रो जिल्लामा कमजोर छ । अन्यत्र पनि त्यति राम्रो संगठन उनीहरूले गर्नसकेका छैनन् । तर उनीहरूसँग मधेस आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट छ । त्यो सेन्टिमेन्टले काहीँकाहीँ भोट तान्न सक्छ । हाम्रा जिल्लामा मेयर, उपमेयरमा राजपाले जित्न सक्दैन । कुनै कुनै वडामा राजपाको अध्यक्ष आउन पनि सक्छ ।
० राजपा चुनावमा आउने भएपछि २ नम्बर प्रदेशको चुनाव शान्तिपूर्ण हुन्छ ?
– यसमा विमति जनाउने कुरै छैन । यसै पनि चुनाव शान्तिपूर्ण नै हुन्थ्यो । दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएन र ? भयो नि । राजपा पनि चुनावमा आयो, यो राम्रो कुरा हो । उहाँहरू चुनावमा आउनुमा कांग्रेसको नेतृत्वलाई जस जान्छ ।
० तपाईहरूले कुन कुन एजेन्डा उठाउँदै हुनुहुन्छ ?
– हामी राष्ट्रिय एजेन्डासँगै मधेसका एजेन्डा पनि उठाउँछौं । नेपाली कांग्रेसले नेपालको राजनीतिको हरेक घटनाक्रमको अगुवाइ गरेको छ । हरेक आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसको अगुवाइमा भएको छ । यो स्थिर र अनन्तसम्म राजनीतिको अगुवाइ गरिरहने पार्टी हो । माओवादी जनयुद्धको क्रममा त्यति ठूलो संख्यामा मान्छे मारिए । त्यत्रो खुनखराव भयो । हाम्रो नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुभयो । २०६२÷६३ सालको आन्दोलनको अगुवाइ पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधानको निर्माण भएको हो । कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधानको कार्यान्वयन पनि हुँदैछ । यी विषयलाई हामीले राष्ट्रिय रूपमा उठाउँछौ ।
अहिले मधेसमा जुन जुन मुद्दाहरू उठाइएका छन्, ती मुद्दाहरू उठाउने काम नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । एमालेका कारण त्यो विधेयक पास हुन सकेन । एमालेले आफूलाई राष्ट्रवादी पार्टी भन्छ, तर त्यो राष्ट्रवादी होइन । ऊ राष्ट्रघाती पार्टी हो । विभाजनकारी पार्टी हो । देशमा सबै जात, वर्ग, क्षेत्रको बराबरी रूपमा विकास भएन भने त्यसले रााष्ट्रिय एकतामा मद्दत पु¥याउन सक्दैन । त्यसबाट राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्दैन । एमालेले राष्ट्रिय एकतालाई बिगार्न खाजेको छ । त्यसैले एमालेलाई राष्ट्रघाती भने हुन्छ । जानेर हो नजानेर हो, उसले राष्ट्रघाती काम गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले तराई मधेस, पहाडको सद्भाव जोड्न खोजेको छ । विभेदमा परेका क्षेत्र, जाति र वर्गको अधिकारका लागि नेपाली कांग्रेस लडेको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाएको छ ।
० तपाईहरूले मधेसका कुन कुन मुद्दा उठाउनु हुन्छ ?
– विगतमा म प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सभापति थिएँ । पछि कांग्रेसको पनि सभापति भएको छु । मधेसका मुद्दा उठाउने सवालमा म कुनै पनि मधेसी दलभन्दा पछाडि छैन । खासगरी म धनुषाको कुरा गर्दैछु । जतिबेला नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस एक भयो । एकता सभा भइरहेको बेलामा केही साथीहरूले कुरा उठाए, धनुषाका सभापति रामसरोज यादव र पर्साका सभापति अजय द्विवेदी फोरम नेपालका हुन् । उनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्छ भनेर केही साथीहरूले कुरा उठाए । किनभने मधेसका मुद्दाहरूलाई हामीले जोडदार रूपमा उठाएका थियौं । त्यसैले मधेसमा नेपाली कांग्रेस सबै न्दा अगाडि छ र सबैभन्दा बलियो पनि नेपाली कांग्रेस नै छ ।
० चुनावको मुखामा संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल भएको छ, यसले तपाईहरूलाई चुनावमा जान अप्ठ्यारो परेको त छैन ?
– हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । किनभने हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गराउन सुरुदेखि नै प्रयास गरेका हौं । हाम्रो प्रयासले मात्र केही लागेन । गत वैशाखमै हामीले संशोधन प्रस्तावलाई मतदानमा लैजान खोजेका थियौं । त्यतिखेर दुई तिहाइको स्थिति पुग्न पुग्न लागेको थियो, तर राप्रपाका केही सांसदहरू संसद्मा नआएपछि मतदान हुन सकेन । यसपटक सरकारले राजपासँग सहमति गरेर संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मतदानमा लग्यो । र, यो प्रस्तावलाई टुंगोमा पनि पु¥यायो । एमाले र एमालेसँग नजिक भएका केही प्रतिस्पर्धी दलहरूका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन सकेन । त्यसकारण संशोधन प्रस्ताव पास नहुनुको मुख्य कारण एमाले नै हो । किनभने एमालेले राष्ट्रियता बलियो बनाउन चाहँदैन । राष्ट्रियता बलियो होस् भन्ने एमालेको चाहना नै होइन । २ नम्बर प्रदेशका सबै जनताले यो बुझेका छन्, नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्न खोजेको थियो, तर एमालेका कारण संशोधन प्रस्ताव पास हुन सकेन भन्ने थाहा सबैलाई छ । त्यसैले २ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस पहिले पनि बलियो थियो । अहिले पनि बलियो नै हुन्छ ।
Tarun Khabar0response सोमबार,१२ भाद्र २०७४ 313 Views